Londra, Karaiba: Lokon’ny Karnavaly Ao Notting Hill · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2017 15:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, عربي, 繁體中文, 简体中文, Español, русский, English
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny Aogositra 2007 ity adika eto ity)
Maka aina eo amin'ny sisin-dalana nandritra ny filaharan'ny ankizin'ny Karnavaly ao Notting Hill ireo tovovavy mitafy mena, tamin'ny Alahady 26 Aogositra 2007. Sary avy amin'i Cristiano Betta
Fetibe tsy ivohan'ny Banky volana Aogositra ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, izay midika ho andro mibaliaka masoandro, mahafinaritra eny an-kalamanjana – sy Karnavaly Notting Hill, karnavaly lehibe indrindra amin'ny endrika Karaibeana any Eoropa ary iray amin'ireo fetiben'ny fahavaratra lehibe indrindra na aiza na aiza. (Tamin'ny taona 2006, olona iray tapitrisa no mety ho nandray anjara, na nanao sarontava na mpijery.)
Nanomboka tamin'ny taona 1965, nampiantrano ity hetsika ity ny faritra Notting Hill, andrefan'i Londra, izay mifototra amin'ny fomba amam-panao amin'ny karnavaly Karaibeana isan-karazany (indrindra i Trinidad's), ary koa aingam-panahy avy amin'ireo fetibe sy mozika avy amin'ny faritra maro manerantany izay namantaran'ny mponina Londra ny vakokany ankehitriny. Mpanova endrika sy fitafy no mandihy sady manao diabe mirefy efatra kilaometatra miaraka amin'ny feo mozika sound systems sy tarika mpampandihy, ka mpijery an'arivony no mitazana, mankafy ny fampisehoana sy ny sakafo nomanin'ireo mpivarotra eny amoron-dalana (toa afaka mahazo gilasy voanio mihitsy ianao). Maharitra roa andro ankehitriny ny karinavaly, miaraka amin'ireo tarika ankizy manao matso amin'ny Alahady alohan'ny Andro tsy ivohan'ny Banky ary ny olon-dehibe kosa amin'ny fetibe mihitsy.
Mandritra izany fotoana izany, mpaka sary an-jatony, matihanina sy mpankafy no maka ny sarin'ny loko sy ny herin'ny korana, ary nisy ireo nandefa ny sariny tamin'ny aterineto izay andeha ankafizintsika. Indreto ny fantin-tsary tamin'ny Fetiben'ny Notting Hill tamin'ity taona ity izay navoaka tao amin'ny Flickr.
Tahaka any J'Ouvert, ny hetsika alohan'ny fiposahan'ny masoandro izay manokatra ireo karnavaly Karaibeana marobe, mihoso-potaka ireo mpandray anjara (manova endrika sy fitafy): Fetibe Notting Hill, Alahady 26 Aogositra, 2007. Sary avy amin'i Robert P. Byrne. (Jereo ato raha hijery ireo sariny maromaro tamin'ny Karnavaly Notting Hill.)
Ankizy manao fitafy fetibe — miaraka amin'ny kiririoka ny tovovavy eo amin'ny ankavia mba hampifanaraka ny redon'ny mozika; Alahady 26 Aogositra 2007. Sary avy amin'i virgorama. (Jereo ato raha hijery sary maromaro tamin'ny Notting Hill.)
Lalan'ny filaharambe ao Ladbroke Grove; Alahady 26 Aogositra 2007. Sary avy amin'i london emigre. (Jereo ato ireo sariny maromaro tamin'ny Notting Hill.)
Miloko volamena amin'ny masoandro — sa ny famirapiratan'ny akanjony manokana izy? Alahady 26 Aogositra 2007. Sary avy amin'i sallylondon. (Jereo ato ireo sariny tamin'ny Notting Hill.)
Ny aingam-panahy Trinidadiana no mety hoe matanjaka indrindra tamin'ny Fetibe Notting Hill, saingy nankalazain'ireo mponin'i Londra manana fiaviana ao amin'ny faritra maro ao Karaiba hatrany ny fetibe. Mandihy miaraka amin'ny sainam-pirenena St. Kitts sy Nevis ity vehivavy ity; Alahady 26 Aogositra 2007. Sary avy amin'i virgorama. Mpandray anjara miaraka amin'ny sainam-pirenen'ny faritra hafa Karaiba: Goyaney, sary nalain'i Tim Fearn; Vehivavy Trinidadiana, sary nalain'i Cristiano Betta; Grenadiana, sary nalain'i P*E*T*A.
Ny Dame Lorraine dia mpandray anjara diso mahatsikaky nentim-paharazana amin'ny Karnavaly Trinidad. Toa mahazo aina miaraka amin'ny fitafiany feno haingo ity endrika Dame Lorraine ao Notting Hill ity. Alatsinainy 27 Aogositra 2007. Sary avy amin'i Cristiano Betta. (Jereo ato raha hijery ireo sariny maromaro tamin'ny Notting Hill.)
Fifaliana ho an'ny maso sy ny sofina: manafana ny lanonana ny tarika mpively amponga mitovy; Alatsinainy 27 Aogositra 2007. Sary: margaritanitz. (Ato raha hijery ireo sary nalainy nandritra ny Fetibe Notting Hill.)
Ny Fetibe Notting Hill dia fantatra hatry ny ela ho fetibe Karaibeana, saingy ankehitriny, mandray anjara ihany koa ireo mponina ao Londra avy amin'ny tontolo ara-kolontsaina marobe. Niakanjo fitafy Shinoa ireto mpandihy ireto, miaraka amin'ireo mpankafy; Alatsinainy 27 Aogositra, 2007. Sary: Cristiano Betta.
Ireo saron-tava, ireo solovolo, ireo volom-borona? Veniziana, Karaibeana, Azteka? Tsia, Notting Hill ihany; Alatsinainy 27 Aogositra 2007. Sary: Cristiano Betta.
Raha hijery sary maromaro tamin'ireo sy tamin'ireo mpaka sary hafa, jereo ny Fetibe Notting Hill 2007 ao amin'ny Flikr.